မေတ္တာပန်းတို့ လန်းရာမြေ: အင်ဒိုနီးရှားဗုဒ္ဓသာသနာ (Borobudur pagoda)
အင်ဒိုနီးရှားဗုဒ္ဓသာသနာ (Borobudur pagoda)
Borobudur,aBuddhist stupa in the Mahayana tradition, is the largest Buddhist monument in the world. Located on the Indonesian island of Java, 40 km (25mi) northwest of Yogyakarta, Borobudur was built around 750 AD. The magnificent temple isathree-dimensional mandala (diagram of the universe) andavisual representation of Buddhist teachings. HistoryThere is no written record of who built Borobudur or of its intended purpose. The construction time has been estimated by comparison between carved reliefs on the temple's hidden foot and the inscriptions commonly used in royal charters during the eight and ninth centuries. Borobudur was likely founded around 750 AD. This corresponds to the peak of the Sailendra dynasty in central Java (760–830 AD), when it was under the influence of the Srivijayan Empire. The construction has been estimated to have taken 75 years and been completed during the reign of Samaratungga in 825. For centuries, Borobodur lay hidden under layers of volcanic ash. The reasons behind the desertion of this magnificent monument still remainamystery. Some scholars believe that famine caused by an eruption of Mount Merapi forced the inhabitants of Central Java to leave their lands behind in search ofanew place to live. When people once again inhabited this area, the glory of Borobudur was buried by ash from Mount Merapi. Borobudur was rediscovered in 1814 by Sir Thomas Stamford Raffles who, during his visit in Semarang, receivedareport indicating the discovery ofahill full of many carved stones. The hill was believed by the local inhabitants to be the site of an ancient monument called budur. Raffles then commissionedateam led by Cornelius to investigate the hill. It was in 1835 that the site was cleared. Some efforts were made to restore and preserve the colossal monument since then. Unfortunately, in 1896 the Dutch colonial government gave away eight containers of Borobudur stones, including reliefs, statues, stairs and gates, as presents for the King of Siam who was visiting Indonesia. A restoration program undertaken between 1973 and 1984 returned much of the complex to its former glory, and the site has since becomeadestination of Buddhist pilgrimage. On January 21, 1985 the temple suffered minor damage due toabomb attack. In 1991, Borobudur was listed by UNESCO asaWorld Heritage Site. What to SeeViewed from above, Borobudur takes the form ofagiant mandala, symbolically depicting the path of the bodhisattva from samsara to nirvana, through the story of Sudhana described in the Gandavyuha Sutra,apart of the Avatamsaka Sutra. In total, this massive monument contains over2million stone blocks. Some scholars think that this massive monument isagigantic textbook of Buddhism to help people to achieve enlightenment. To read this Buddhist textbook in stone requiresawalk of more than two miles. The walls of the galleries are adorned with impressive reliefs illustrating the life of Buddha Shakyamuni and the principles of his teaching. Representing the existence of the universe, Borobudur perfectly reflects the Buddhist cosmology, which divides the universe into three intermingled separate levels. The three levels are Kamadhatu (world of desire), Ruphadatu (world of forms), and Arupadhatu (world of formlessness).
The hidden base of Borobudur was originally the first level, which contains the gallery of Kamadhatu level. It is thought that during construction Borobudur experiencedalandfall that threatened the entire building. To prevent the whole monument from collapsing, the Kamadhatu level was closed and made intoanew base that holds Borobudur steady. This level of Kamadhatu pictures the world of passion and the inevitable laws of karma. The first 117 panels show various actions leading to one and the same result, while the other remaining 43 panels demonstrate the many results that follow one single effect. At least 160 relief panels were carved around this level, based on the manuscript of Karmavibhangga. What is left of these can be seen in the Southeast corner of this level. The reliefs of the Rupadhatu level show the stories based on the manuscripts of Lalitavistara, Jataka-Avadana and Gandavyuha.
The Lalitavistara reliefs, consisting of 120 panels, tell us about the life of Siddhartha Gautama Buddha. It starts with the glorious descent of Buddha from the Tushita heaven. Born as Prince Siddhartha, Buddha's childhood was isolated from the outside world's misery. Accidentally witnessing the misery of sickness, decrepitude and death, young Prince Siddharta decided to escape from the worldly life and commencing his search of freedom from suffering. Siddhartha’s long and painful search finally led him to the highest level of enlightenment and made him Buddha, the Enlightened One. This story ends with Buddha’s sermon in the Deer Park near Benares. The Jataka isacollection of stories about Buddha's previous reincarnation, chains and virtues. According to the Jataka, Buddha was born 504 times before being born as Prince Siddharta, taking on the forms of god, kings, princes, learned men, thieves, slaves, andagambler. Many times he was born in the forms of animals such as lion, deer, monkey, swan, big turtle, quail, horse, bird and many others. But the Boddhisatva (Buddha-to-be) was distinguished from all other kings, slaves, or animals among whom he lived. The Boddhisatva is always superior and wiser than those around him. As to the relief of Avadana, the main figure is not the Buddha himself. All the saintly deeds pictured in this part are attributed to other legendary characters. The stories are compiled in Dvijavadana (Glorious Heavenly Acts) and the Avadana Sataka (The Hundred Avadana).
The first 20 frames in the lower series of stories on the first gallery depict the Sudhanakumaravana. The series of reliefs covering the wall of the second gallery is dedicated to Sudhana’s tireless wandering during his search for the highest wisdom. The story is continued on the walls and balustrades of the third and fourth galleries. Most of the 460 panels depict the scenes based on the Mahayana text Gandavyuha, while the concluding scenes are derived from the text of Badracari. On the last three circular uppermost terraces, 72 stupas circle the huge main stupa that crowns the top of the temple. The circular form represents the eternity without beginning and without end,asuperlative, tranquil, and pure state of the formless world. There are no reliefs on the three circular terraces. All but the largest central stupas on the upper levels containa(more or less) life-sized statue of the Buddha kneeling, although many of these statues are missing or damaged. There are also many alcoves along the lower levels which contain similar statues but many of these are missing or damaged as well. စာမေးပွဲအတွက် လိုအပ်ရာရာတွေကို လေ့လာရန် တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်သို့ အကြိမ်များစွာ သွားရောက်ပြီး လေ့လာဖွယ်ရာများကို လေ့လာရသည်၊၊ စာကြည့်တိုက်ထဲတွင် အမှတ်မထင် စာအုပ် ကြီး တအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်၊ သေခြာလှန်ကြည့်တော့မှ ဗောရောဗုဒေါ စေတီတော်ကြီး အကြောင်း ရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်ကို သိလိုက်ရသည်၊၊ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း စိတ်ဝင်စားလာတာ ကြောင့် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည့် စာရွက်များကို မိတ္တူကူးယူခဲ့ရသည်၊၊ စာမေးပွဲ ပြီးလျင် ဤစေတီတော်ကြီးအကြောင်းကို စာတမ်းရေးပြီး ၀ဘ် ဆိုက်တွင် တင်မည်ဟု မှတ်သား ထားလိုက်သည်၊၊
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမှတ်တမ်းတင် ဗုဒ္ဓစေတီတော်ကြီး သမိုင်းနှင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ဖြတ်သန်းလာပုံ များကို “အလင်း စက်” စာဖတ်သူများသိစေချင်တာကြောင့် အရှင် သမိုင်းအချက်အလက်များကိုရနိုင် သမျှရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါသည်၊၊ အမှားများ၊ ချို့ယွင်းချက်များ၊ ကွာဟချက်များရှိ လျင် “အလင်း စက်”ကို ထောက်ပြ အကြံပြုကြဖို့လည်း တောင်းပန်လိုပါသည်၊၊ သေခြာလေ့လာ ကြည့်သောအခါမှ ဤစေတီတော်ကြီးသမိုင်းသည် ဘာသာရေးသက်သက်တွင်မကဘဲ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးများပါ ရောနှောပါဝင်နေသည်ကို သိရသည်၊၊ သုတေသနစာတမ်းကြီး တစောင်လောက်ရေးမှ ပြည့်စုံမည်ကိုလည်း သဘောပေါက်မိသည်၊၊ တိုတိုနှင့် စာဖတ်သူစိတ်ဝင်စားလောက်သည့် အချက်အလက် တချို့တ၀က်ကို စုစည်းပြီး ဤစာတမ်းကို ကြိုးစားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် သြစတြေးလျတိုက်နှင့် အာရှတိုက်အကြား အီကွေတာပေါ်တွင်တည်ရှိသော ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်၊၊ အရှေ့အန္ဒိယကျွန်းစုနိုင်ငံဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်၊၊ ကျွန်းပေါင်း(၁၇၅၀၈) ကျော်ရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းများအရသိရသည်၊၊ ထင်ရှားသော ကျွန်းကြီးများမှာ--- (၁) စုမတြားကျွန်း၊
(၅) အနောက်ပိုင်း ကလီမန္တံ (ခေါ်) ဘိုညိုတောင်ပိုင်းကျွန်း၊ (၆) စူလဝေစီ(ခေါ်) စေလေဘတ်ကျွန်းတို့ ဖြစ်သည်၊၊ ဤနိုင်ငံသည် အီကွေတာပေါ်တွင် တည်ရှိနေသောကြောင့် ပူအိုက်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်၊၊ သို့သော် မိုးမကြာခဏ ရွာလေ့ရှိသောကြောင့် ရာသီဥတုမှာ နေသာသည်ဟုပင်ဆိုနိုင်သည်၊၊ ဂျုံနှင့် စပါးတို့ အထွက်ကောင်းသောကြောင့် ကျွန်၏နာမည်ကိုပင်ဂျာဗား(ယ၀)=ဂျုံစပါးပေါသောကျွန်းဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ သည်၊၊ ဂျာဗားကျွန်းနှင့် ဗာလီကျွန်းတွင်နေထိုင်သူများမှာ ရုပ်ရည်အားဖြင့် မြန်မာတို့နှင့် များစွာဆင်တူသည်၊၊ အလုပ်အကိုင်မှာလည်း လယ်ယာကိုအဓိကထားပြီး လုပ်ကိုင်ကြလေသည်၊၊ ယ္ခုအခါ စက်မှု ထွန်းကားသောနိုင်ငံတစ်ခု အဆင့်သို့ရောက်နေပြီလည်း ဖြစ်သည်၊၊ ဤနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေသိက်သည်းလွန်းသော နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင်ပါသည်၊၊ လူဦးရေမီလီယမ်(238) မျှရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်၊၊ နိုင်ငံ၏မြေအကျယ်အ၀န်းနှင့် လူဦးရေများစွာ မမျှတသောနိုင်ငံ ဖြစ်သည်၊၊ ယ္ခုအခါ အန္ဒိယမှ ကုန်သည်များနှင့် တရုပ်ပြည်မှ ကုန်သည်တို့အခြေချနေထိုင်သောနိုင်ငံ ဖြစ်သောကြောင့် Indochina=အင်ဒိုချိုင်းနားဟုလည်း ခေါ်တွင်လေသည်၊၊
အင်ဒိုကျွန်းတွင် မူလနေထိုင်ကြသည့်လူမျိုးများမှာ ဘာဘေးရီးယန်းလူမျိုးများဖြစ်သည်ဟု သမိုင်းမှတ်တမ်းက ဆိုပါသည်၊၊ သူတို့သည် တော တောင်နှင့် ပင်လယ်များတွင် သားငါးရှာဖွေ စားသောက် အသက်မွေးကြသည့် လူရိုင်းသာသာလူမျိုးစုများလည်း ဖြစ်သည်၊၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(2000) ကျော်က အန္ဒိယပြည်မှ ကုန်သည်များသည် စုမတြားကျွန်းသို့ ကုန်ရောင်းရောက်လာပြီး၊ ဂျာဗားကျွန်း အထိ ရောင်းဝယ်ကြသည်ဟု မှတ်တမ်းတွင်တွေ့ရသည်၊၊ အန္ဒိယမှကုန်သည်များသည် ကုန်သွယ်မှုနှင့်အတူ အန္ဒိယယဉ်ကျေးမှု၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတို့ကို စုမတြားကျွန်းသို့ သယ်ဆောင် လာကြပြီး၊ အခြေခြနေထိုင်သည်အထိ နယ်မြေချဲ့လာခဲ့ကြသည်၊၊ ရိုးရာအစဉ်အလာ နတ်ဒေ၀တာများ ကို ကိုးကွယ်သည့် အင်ဒိုကျွန်းဒေသခံ(ဘာဘေရီယန်း)တို့အား ကုန်သည်လူသစ်များက ဟိန္ဒူဘာ သာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့တစတစ သွတ်သွင်းခဲ့သောကြောင့် ကာလကြာလာသောအခါ ဟိန္ဒူဘာသာ ၀င်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုရင်များ အုပ်စိုးသည့် နိုင်ငံတခုဖြစ်လာခဲ့သည်၊၊ ထိုဘုရင်များထဲတွင် (A.D.7)ရာစု၊ စုမတြားတောင်ပိုင်း ပလင်ဘန်းမြို့တော်တွင် နန်းစိုက်သော သီရိဝိ ဇယမင်း၏ လက်ထက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းကားဆုံးဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများက ဆိုသည်၊၊ ထိုမင်းကြီးသည် သီရိဝိဇယ တက္ကသိုလ်ကြီးကိုတည်ထောင်၍ သက္ကဋစာပေ ဟိန္ဒူစာပေနှင့် ပါဠိစာပေအပြင် အခြားတိုင်းတပါး စာပေများကိုပါ တက္ကသိုလ်ဘာသာရပ်များအဖြစ် သင်ကြားစေသဖြင့် ထို တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ခေတ်အခါအလျောက် နာမည်ကြီးသော စာပေလေ့လာရေး ဌာနကြီးတခု ဖြစ်ခဲ့ သည်ဟုလည်း သမိုင်းမှတ်တမ်းတွင် လေ့လာရပါသည်၊၊ နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်း သားများ လာရောက် ပညာသင်ကြသည့် တက္ကသိုလ်ကြီးတခုလည်း ဖြစ်သည်၊၊ ဤတက္ကသိုလ် ကြီးကြောင့် စုမတြားကျွန်း သည် ထိုခေတ်က အင်ဒိုနေရှားကျွန်းအားလုံးတွင် ထင်ရှားခဲ့သည်၊၊ တရုပ်ရဟန်းတော် ဟူယင်စန်၏ ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွင်လည်း “သူ အင်ဒိုကျွန်းသို့ရောက်စဉ်က သံဃာတော်(၁၀၀၀)ကျော် စာသင်နေသည့် တက္ကသိုလ်ကြီးတခုကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း” ခရီးသွားမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်၊၊
နောက်ထပ်ထူးခြားစေသော ပြယုဂ်မှုတစ်ခုမှာ(A.D.8)ရာစုက တည်ဆောက်ခဲ့သော ဗောရောဗုဒေါ စေတီတော်ကြီးဖြစ်သည်၊၊ ဤစေတီတော်ကြီးကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသော ဗုဒ္ဓစေတီတော်ကြီးအဖြစ် UNESCO က အသိမှတ်ပြုထားသည့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် World Heritage ဖြစ်သည်၊၊ ဤမျှကြီးမားသော စေတီတော်ကြီးတစ်ဆူကို တည်ဆောက်ထားသည်ကို လေ့လာသောအားဖြင့် ထိုခေတ်က ဤနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ အလွန်ထွန်းကားသောနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိသာသည်၊၊ စေတီတော်ကြီးသည် Central Java Island,Jogiakarta city တွင် တည်ရှိပြီး၊ အဆင့်(၁၀) ဆင့်ရှိသည်၊၊ စေတီတော်ပေါ်သို့ လေးမျက်နှာက်မှ အပေါ်ထပ်အဆုံးအထိ ကျောက်လေခါးဖြင့် တိုက်ရိုက်တက်နိုင်ပါသည်၊၊ စေတီတော်ကြီးတွင် ပတ်ပတ်လည်သွားလာနိုင်သော အဆင့် ကိုးဆင့်ရှိသည်၊၊ ဖိနပ်တော်မှ အမြင့်ပေ(၁၃၈.၆)နှင့် ထုထည်ပေ(၄၆၇၄၄.၅)၊ အကျယ်ပေ (၃၉၆)ရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းများတွင် လေ့လာသိရှိရသည်၊၊ ဤဗောရောဗုဒေါစေတီတော်ကြီးသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ အန်ကောဝတ် ကျောင်းတော်ကြီးထက် အနှစ်သုံးရာ စောကြောင်းလည်း UNESCO မှတ်တမ်းများက အခိုင်အမာဆိုထားပါသည်၊၊
အန္ဒိယနိုင်ငံ နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ဟောင်းကို တူးဖော်စဉ်ကလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သော ကြေးပြားစာတမ်းကို တွေ့ခဲ့ကြသည်၊ ထိုကြေးပြားတွင်“သုဝဏ္ဏဒီပခေါ် စုမတြားကျွန်းဘုရင် သီရိဗလ ပုတ္တဒေ၀က ရာဇဂြိုဟ်ပြည်နယ် ဂယာစီရင်စုမှ ရွာငါးရွာကို မိမိပိုင်သော စုမတြားမှ ရွာငါးရွာနှင့် လဲလှယ်၍ နာလန္ဒာကျောင်းတော်ကြီးအား လှုပါ၏”ဟုရေးသားထားသည်ကို တွေ့ကြရလေသည်၊၊ ထိုကြေးစာတမ်းမှ‘သုဝဏ္ဏဘူဒီပ’ဟူသောစာကိုထောက်ဆ၍ သီရိဓမ္မာသောကမင်းလက်ထက်က ကိုးတိုင်း ကိုးဌာနသာသနာပြုရာတွင်ပါဝင်သော ‘သုဝဏ္ဏဘူမိ’ဟူသည် စုမတြားကျွန်းဖြစ်သည်ဟုလည်း သမိုင်းဆရာတို့ ဆိုကြသည်၊၊ ဤမှတ်တမ်းသက်သေများကိုထောက်ဆ၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ခရစ်တော်မပေါ်မှီ နှစ်ပေါင်း(300)ခန့်ကပင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သာသနာစည်ပင်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းသု တေသီတို့က ဆုံးဖြစ်ကြသည်၊၊
“ဗောရောဗုဒေါ”ဟူသောအမည်မှာ “၀ိဟာရ ဗုဒ္ဓေါ”မှဆင်းသက်လာသည်ဟု ဘာသာဗေဒပညာရှင်တို့က ဆိုသည်၊ ‘မြတ်စွာဘုရား ကျောင်းတော်’ဟု ဆိုလိုဟန်ရှိသည်၊၊ “ဗုဒူးရွာတွင်တည်ရှိသောကြောင့် ဗောရောဗုဒေါ ဟုခေါ်သည်”ဟုလည်းဆိုသည်၊၊ စေတီတော်ကြီးသည် အောက်ခြေမှ ဖိနပ်တော်မှ (၃၉၄)ပေ အလျား အနံစီရှိသည်၊၊ အမြင့်ပေ(၁၃၈)ပေ မြင့်ပါသည်၊၊ ဖိနပ်တော်အထက်တွင် အဆင့် လေးဆင့်ရှိ၍၊ ၀ရံတာ အကာအရံရှိပါသည်၊၊ စေတီတော်ကြီးကို cubic meter 55000 volcanic stonesများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်ဟု သိရပါသည်၊၊ နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကျော်ကြာ တည်ဆောက်ရ သည်ဟုလည်း စေတီတော် အတ္ထုပ္ပတ္တိစာတမ်းများက ဆိုပါသည်၊၊ အဆင့်တိုင်းတွင် ပတ်၍လှည့်လည် ကြည့်ရှုနိုင်သော လမ်းရှိသည်၊ ၀ရံတာ၏ အထက်တွင် ဘုရားကျောင်းဆောင်လေးများရှိပြီး၊ အဆောင်တိုင်းတွင် လူတကိုယ်စာမျှကြီးသော တင်ပလ္လင်ခွေပုံ ကျောက်ဆင်းတု ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူစီရှိသည်၊၊ ထိုဆင်းတုတော်များမှာ တမျက်နှာတွင်(၁၀၈)ဆူရှိသည်၊၊ လေးမျက်နှာပေါင်းလျင်(၄၃၂) ဆူဖြစ်ပါသည်၊၊ မြောက်ဘက်မျက်နှာမှ ရုပ်ပွားတော်များသည် လက်ယာလက်ဝါးဖြင့်ကာလျက် ဟန့်တားနေဟန်ဖြစ်သည်၊ ထိုသို့သော မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အမူအရာကို‘အဘယ မုဒြ’ဟု စာအခေါ်ရှိသည်၊ အားပေးလျက် တရားဟောတော်မူဟန်ဖြစ်သည်၊၊ အရှေ့ဘက်မျက်နှာမှ ဆင်းတုတော်များသည် လက်ဝါးကို လက် ယာခြေတော်ပေါ်၌ မှောက်လျက် တင်ထား သည့်ပုံများ ဖြစ်ပါသည်၊ ‘ဘူမိဖဿ မုဒြ’ဟု ခေါ်သည်၊ မြေကိုသက်သေတည်၍ တရားတော် ဟောနေ ဟန်ဖြစ်သည်၊၊ တောင်ဘက်မျက်နှာမှ ဆင်းတုတော်များသည် လက်ယာလက်ဖ၀ါးကို လက်ယာခြေတော်ပေါ်၌ ပက်လက်လှန်ဖြန့်လျက် တင်ထားပုံများဖြစ်သည်၊၊‘ဒါန မုဒြ’ဟုခေါ်သည်၊ ပစ္စည်း ဥစ္စာကို တွယ်တာ တတ်မက်မှုဖြင့် သိမ်းဆုပ်မထားဘဲ ပယတ ပါဏိ=ဖြန့်ထား သောလက်ရှိလျက် ရက်ရက်ရောရော အလှုဒါနပြုရန် တိုက်တွန်းလျက် တရားဟောတော်မူဟန်ဖြစ်သည်၊၊ အနောက်ဘက်မျက်နှာမှ ဆင်း တုတော်များသည် လက်ဝဲလက်ပေါ်မှာ လက်ယာလက်ကို ပက်လက်လှန်လျက် တင်ထားပုံများဖြစ် သည်၊ ‘ဈာန မုဒြ’ဟုခေါ်သည်၊ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဈာန်ဝင်စားနေပုံ ဖြစ်သည်၊၊
အဆင့်လေးဆင့်တွင် အတွင်းအပြင်နံရံများ၌ (၅၅၀)ဇာတ်တော် ရုပ်ပုံများ၊ ဘုရားအလောင်းတော် နောက်ဆုံးဘ၀ပုံများ၊ ဘုရားဖြစ်ပြီးပုံများကို ရုပ်လုံးကားအဖြစ်ဖြင့် ထွင်းထုထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါ သည်၊၊ နှစ်ပေါင်း(၁၀၀၀)ကျော်က ကျောက်ထွင်း ပန်းချီကားချက်များမှာ ယနေတိုင် ပီပီသသရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်၊၊ ဘုရားအလောင်းတော် နိမိတ်ကြီးလေးပါးမြင်ပုံ၊ တောထွက်ပုံ၊ ဆန္ဒ အမတ်ကို မြင်းနှင့်အတူ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လွှတ်ပုံ၊ ဘုရားအလောင်းတော်အား ဗြဟ္မာမင်းက သင်္ကန်းဆက်ကပ်နေပုံများကို နောက်ဘက်မျက်နှာတွင် တွေ့ရသည်၊၊ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးတို့အား တရား ဟောနေပုံကို အရှေ့ဘက်မျက်နှာတွင် တွေ့နိုင်သည်၊၊ ဇာတ်ကားပန်းချီကားချပ်ပေါင်း(၂၁၄၁) ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်၊၊ ထိုကျောက်ထွင်း ပန်းချီကားချပ်များကို တချပ်ခြင်းဆက်လျက် စီတန်းထားမည်ဆိုလျင် (၃)မိုင်ခန့်မျှရှိမည်ဟု ဆိုပါသည်၊၊
ထိုလေးဒေါင့်ပုံ လေးဆင့်ပြီးသောအခါ အထက်တွင် အပိုင်းလေးဆင့်ရှိသေးသည်၊၊ အောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ခေါင်းလောင်းပုံ စေတီငယ်များ အစဉ်အတိုင်း(၃၂)ဆူ၊(၂၄)ဆူ၊(၁၆)ဆူ၊ရှိ၍ စုစုပေါင်း စေတီတော်ငယ်(၇၂)ဆူရှိပါသည်၊၊ ထိုစေတီလေးများမှာ အုပ်ဆောင်းပုံစံကဲ့သို့ နံရံတွင်အပေါက်ငယ်လေးများ ပါရှိသည်၊ အထဲတွင် တင်ပလ္လင်ခွေပုံ ကျောက်ဆင်းတု တဆူစီရှိပါသည်၊၊ အောက်လေးဆင့်မှ ဆင်းတုတော်(၄၃၂)ဆူနှင့် ဤအဆင့်မှ ဆင်းတုတော်(၇၂)ဆူနှင့် ပေါင်းလျင် ဆင်းတုတော်ပေါင်း (၅၀၄)ဆူဖြစ်သည်၊၊ ဆင်းတုတော်အားလုံး လူတကိုယ်စာမျှ ကြီးပါသည်၊၊ စေတီတော်ကြီး၏ အထက်ဆုံးအဆင့်တွင် အလယ်ဗဟိုဠ်တည့်တည့်၌ ခေါင်းလောင်းပုံစေတီကြီး တော်တဆူ ရှိပါသည်၊၊ ထိုစေတီတော်တွင်မူ အတွင်းသို့လှိုဏ်ခေါင်း မပါသည်ကို တွေ့ရပါသည်၊၊ ဤဗောရောဗုဒေါစေတီတော်ကြီးကို (၈)ရာစုတွင် တည်ဆောက်သည်ဟု စေတီတော်သမိုင်းစာပေများက ဆိုပါသည်၊၊ (A.D.775)ခုတွင် ပြီးစီးသည်ဟု မှတ်တမ်းပြုထားသည်ကို လေ့လာရပါသည်၊၊ ဤ မျှများပြားသော ကျောက်တုံးများကို ပြုပြင်သယ်ဆောင်၍၊ ဤမျှများပြားသော ဆင်းတုတော်များနှင့် ကျောက်ထွင်း ဇာတ်ကားရုပ်လုံးများကိုထွင်း၍ တည်ထားလှုခဲ့သော စေတီတော်ကြီး၏ မူလဒါယကာအမည်ကို မှတ်တမ်းများတွင် ရှာဖွေမရချေ၊၊
(A.D.8)ရာစုက ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားသော ဘုရင်တပါးပါးက တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုသာ မှတ်ယူရပေမည်၊၊ ဘုရင်ချည်းသက်သက်လည်း ဤမျှခန်းနား ထည်ဝါသော စေတီတော်ကြီးကို မတည်ဆောက်နိုင်၊ ပြည်သူ ပြည်သားများလည်း ပါဝင်ရပေမည်၊ များစွာသောအကြောင်းများကို ထောက်ဆ၍ ထိုခေတ်ထိုအခါက အင်ဒိုကျွန်းတခုလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေချည်း ဖြစ်မည်မှာ မလွဲနိုင်ချေ၊၊ ဗောရောဗုဒေါ စေတီတော်ကြီးတည်ခဲ့သော (A.D.8)ရာစုခေတ်က အန္ဒိယပြည်မှစ၍ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတမ်းတလျောက် မာလာယုကျွန်း(ခေါ်) စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ မလေးကျွန်းစု၊ အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်းစုအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟု ပထ၀ီသမိုင်းကဆိုပါသည်၊၊
(13)ရာစုသို့ရောက်သောအခါ ဂျာဗားကျွန်းမှ ‘ဟဂျမ်ဝုရုက်’အမည်ရှိ ဟိန္ဒူဘုရင်သည် သရီဝိဇယ နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍ အင်ဒိုကျွန်းစုအားလုံးကို အုပ်စိုးခဲ့သည်၊၊ နိုင်ငံ၏အမည်ကိုလည်း ‘မိုဂျိုပဟစ် နိုင်ငံတော်’ဟု ခေါ်တွင်စေလေသည်၊၊ ထိုအချိန်က ဟိန္ဒူဘာသာကို နိုင်ငံတော် ဘာသာအဖြစ်ဖြင့် ကိုးကွယ်ခဲ့သည်၊၊ (13)ရာစုနှစ်မှာပင် အာရေဘီယနိုင်ငံ၊ ပါရှားနိုင်ငံနှင့် အန္ဒိယ နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကမ်းခြေတို့မှ မူစလင်ဘာသာဝင် ကုန်သည်များသည် အင်ဒိုကျွန်းများသို့ ရောက်လာပြီး၊ အခြေခြနေထိုင်ကာ၊ ကျွန်းသားတို့အား မူစလင်ဘာသာသို့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် နိုင်ငံကိုသိမ်းယူသည်အထိ ဖြစ်လာတော့သည်၊၊ ဂျာဗားဟိန္ဒူ မိုဂျိုပဟစ်နိုင်ငံတော်ကြီးကို(1478)ခုတွင် မူစလင်တို့က အပြီးအပိုင်သိမ်းယူလိုက်သည်ဟု မှတ်တမ်းများတွင် လေ့လာရပါသည်၊၊
ယနေ့အချိန်တွင် အင်ဒိုကျွန်းများ၌ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင် အနည်းငယ်နှင့်အတူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်နှင့်၊ မူစလင်ဘာသာဝင်အများဆုံးနေထိုင်သော နိုင်ငံတခုအဖြစ်တွေ့နိုင်သည်၊၊ (13)ရာစု မှစတင်၍ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကွယ်ပျောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်၊၊ အင်ဒိုနီးရှားမြေပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓသာသာနာတော် နှစ်ပေါင်း(700)နီးပါးမျှ ထွန်းကားခဲ့ဘူးသည်ဟု မှတ်သားရပါမည်၊၊ အင်ဒိုကျွန်း များပေါ်မှ သာသနာတော်ဆုပ်ခွာခဲ့သည်မှာ (၂၁)ရာစုအထိဆိုလျင် နှစ်ပေါင်း (၉၀၀)ခန့်ပင် ရှိပေမည်၊၊ မေတ္တာ ချစ်ခြင်း၊ ကရုဏာ သနားခြင်း၊ မုဒိတာ ၀မ်းသာခြင်း၊ ဥပေက္ခာ အညီအမျှစိတ်ထားခြင်း စသည့် ငြိမ်းချမ်းသည့် စိတ်ဓာတ်တို့၏ ရှင်သန်မွေးဖွားခဲ့ရာ စုမတြားမြေပေါ်တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ခွန်အားတို့ ကြီးစိုးရာခေတ်သို့ရောက်ခဲ့သည်မှာ ရာစုနှစ် ရှစ်ခုမှခန့် မျှကြာခဲ့သည်၊၊
(၁၃၁၅)ခု နတ်တော်လဆန်း(၁၁)ရက်၊(၁၇.၁၂.၁၉၅၃)ခုတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာဗားကျွန်း၊ ဂျကာ တာမြို့မှ မစ်တာဘွန်းအန်အမည်ရှိ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ သို့ တရားအားထုပ်ရန် ရောက်လာခဲ့သည်၊၊ ဘွန်းအန်သည် မဟာစည်ဆရာတော် ဘုရားကြီးအထံတွင် ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်များကို ကြိုးစားအားထုပ်ပြီး တရားတော်များကို ကောင်းကောင်းသ ဘောပေါက် နားလည်လာကာ၊ သာသနာတော်၌ ရဟန်းပြုလိုသော စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်၊၊ ထို့ကြောင့် မစ်တာဘွန်းအန်သည် မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးအထံတွင် ရဟန်းပြုခွင့်တောင်းပြီး၊ (၁၃၁၅)ခု၊ တပေါင်းလဆုတ်(၁၅)ရက်၊ (၅.၇.၁၉၅၄)ခု၊ စနေနေ့တွင် ရဟန်းဒါယကာ သတိုးသီရိသုဓမ္မ ဆာဦးသွင်+ဒေါ်သိန်းသိန်းတို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟဖြင့် မြင့်မြတ်သည့် သာသနာ့ဘောင်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပါသည်၊၊ မစ်တာဘွန်အန်၏ ရဟန်းခံရာတွင် မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးက ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ၊ တိပိဋကဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ၊ ဦးညာဏုတ္တရ၊ သီဟိုဠ်ဆရာတော် အာနန္ဒာမေတ္တေယျ၊ ဦးသုဇာတ၊ ဦးဝဏ္ဏိတဆရာတော်တို့က ကမ္မ၀ါဆရာတော်များ ဖြစ်ကြသည်၊၊
သူသည် မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးနှင့် မဟာစည်တရားနည်းပြ စာချဆရာတော်များအထံတွင် တရားအားထုတ်သည့်အပြင် ပါဠိစာပေများကိုလည်း နှစ်နှစ်ခန့်မျှ ကြိုးစားသင်ယူခဲ့ပါသည်၊၊ မစ်တာဘွန်းအန်၏ ရဟန်းဘွဲ့အမည်မှာ အရှင်ဇိနရက္ခိတဟူ၍ ဖြစ်သည်၊၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်က စောင့်ရှောက်သူဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်၊၊ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးသည် ပိဋကတ်စာပေအပြင် အခြားအထွေထွေစာပေ များကိုလည်း နှံ့စပ်သူဖြစ်ရကား အင်ဒိုရဟန်းတော် အရှင်ဇိနရက္ခိတအား ဗုဒ္ဓ၏ လိုရင်းအဓိကျသော သုတ် အဘိဓမ္မာ ၀ိနည်းတို့ပါဝင်သည့် ပါဠိစာပေတို့ကို နှစ်နှစ်အတွင်း နှံ့စပ်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့သည်၊၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ရှေးယခင်က ဗုဒ္ဓသာသနာတော် နေရောင် လရောင်ပမာထွန်းကားခဲ့ပုံများကိုလည်း မဟာစည်ဆရာတော် ကြ၀ါဒတစ်ရပ်အနေဖြင့် သင်ကြား ပြောပြခဲ့လိမ့်မည်မှာ မလွဲချေ၊၊
အင်ဒိုနီးရှားရဟန်းတော် အရှင်ဇိနရက္ခိတသည် မဟာစည်သာနာ့ရိပ်သာတွင် နှစ်နှစ်နီးနီးမျှ တရား အားထုပ် စာပေများသင်ကြားပြီးသောအခါ ဤမျှအေးချမ်းစစ်မှန်သည့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များ အင်ဒိုကျွန်းများမှ ကွယ်ပြောက်ခဲ့ရသည်ကို ရင်နာမဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် အရှင်ဇိနရက္ခိတ သည် အင်ဒိုမြေမှ ကွယ်ပြောက်ခဲ့ပြီးသော ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို တဖန်အသက် သွင်းလိုသော ဆန္ဒ များတ ဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာသည်၊၊ သူသည် မဟာစည်ဆရာတော်အထံတွင် သာသနာပြုရဟန်းတပါး၌ ပြည့်စုံသင့်သည့် အရည်အခြင်းများကို ပြည့်စုံအောင် သင်ကြား ဖြည့်ဆည်းပြီး မိခင်နိုင်ငံဖြစ်သည့် အင်ဒိုနီး ရှားနိုင်ငံသို့ ရဟန်းဝတ်ဖြင့်ပင် ရဲဝံ့စွာပြန်လာခဲ့သည်၊၊ အရှင်ဇိနရက္ခိတ၏ သာသနာပြုခရီးမှာ ပန်းခင်းလမ်းလျောက်ရသလို ဖြောင့်ဖြူးခဲ့သည်ကား မဟုက်ပါ၊ အကြောင်းမှာ မွတ်စလင် အစိုးရ တို့ အုပ်ချုပ်သောအင်ဒိုမြေသို့ ရဟန်းအသွင်ဖြင့် သင်္ကန်းဝတ်ထား သည့် အရှင်ဇိနရက္ခိတအတွက် နေရာမရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည်၊၊ သူ၏မိ သားစု ဆွေမျိုးများသည်ပင် မူစ လင်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်နေရကား ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်းရုံမျှမကဘဲ ရဟန်းပါဝတ်ပြီးသော ရဟန်း တော်ဘွန်းအန်ကို မူစလင်ဘာသာအလိုအရ မိစ္ဆာဒိဌိစာရင်းသွင်းလိုက်ကြတော့သည်၊၊ နေစရာ နေရာ ပေးဖို့မဆိုထားနှင့် အိမ်ရိပ်နင်း သည်ကိုပင် အမင်္ဂလာဟုပြောဆိုကြလေသည်၊၊ မိခင် အင်ဒိုမြေတွင် နေစရာ နေရာမရှိတော့သော ရဟန်းတော်ဘွန်းအန်သည် အင်ဒိုကျွန်းများနှင့် များစွာမဝေးသည့် မာလာယုကျွန်း(စင်္ကာပူ)တွင် ရဟန်းဘ၀အတွက် နေရာအသစ်ကို ရှာဖွေခဲ့ရသည်၊၊ အင်ဒိုနီးရှားသည် စင်္ကာပူမှ တောင်ဘက်မိုင်(၅၂၅)သာဝေးသည်၊၊ ထိုအချိန်က စင်္ကာပူတွင် သီရိလင်္ကာဆရာတော် ဘိက္ခုနာရဒ၊ အာနန္ဒာမေတ္တိယ၊ အရှင်ပိယဒဿိ စသည့် အကျော် အမော်ဆ ရာတော်များ နေထိုင်ကြလေသည်၊၊ ထိုသီရိလင်္ကာဆရာတော်များက အင်ဒိုပြည်ဖွား မြန်မာရဟန်း တော် အရှင်ဇိနရက္ခိတကို လိုအပ်နေသေးသည့် ဗုဒ္ဓစာပေများ၊ တရားအားထုပ်နည်းများကို သင်ကြား ပေးရုံမျှမက၊ ဘာသာခြားတို့အား ဗုဒ္ဓသာသနာသို့ ယုံကြည်လာအောင် သင်ပြဟောပြောနည်းများကို သင်ပေးခြင်း၊ သာသနာ့ညီအကိုတော်များအဖြစ်ဖြင့် အတူအကွနေထိုင်ခွင့်များကို စေတနာ သဒ္ဓါအား ကောင်းကောင်းဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ကြလေသည်၊၊ အရှင်ဇိနရက္ခိတသည် မာလာယုကျွန်း သီဟိုဠ်ဆရာတော်များအထံတွင် တရားအားထုပ် စာပေသင် ကြားနေရင်း မိခင်အင်ဒိုကျွန်းများသို့ မကြာခဏသွားရောက်ပြီး သူ၏မိသားစု၊ မိဘဆွေမျိုးများမှ စ တင်ပြီး ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို ဟောပြောသင်ပြခဲ့သည်၊၊ တစတစ သူ၏မိသားစု၊ မိဘဆွေမျိုးများမှ စတင်ပြီး ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ယုံကြည်လာကာ၊ ငါးနှစ်သက်တမ်းသို့ရောက်သောအခါ အင်ဒိုမြေပေါ် တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ယုံကြည်သူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ပြောင်းလာသူ အရေအတွက် (၆၀၀)ကျော်လာခဲ့ သည်၊၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့မပြောင်းသေးသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်လာသူ အရေအတွက်မှာ ထို့ထက်ပင်များသည်၊၊ အင်ဒိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အသစ်များက အရှင်ဇိနရက္ခိတ၏ မြန်မာပြည်မှ ဆရာအရင်းများကို တွေ့ဖူးချင်ကြကြောင်းနှင့် အင်ဒိုမြေပေါ်တွင် ဒီထက်မက သာသနာအခြေချလို ကြကြောင်း အရှင်ဇိနရက္ခိတအား လျောက်ထားကြလေသည်၊၊
အရှင်ဇိနရက္ခိတနှင့် သူ၏ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အသစ်စက်စက် ဒါယကာ ဒါယိကာမများဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးဌာနသို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့သင့်တော်သည့် သံဃာတပါးပါးကြွရောက် သာသနာပြုရန် ပင့်လျောက်လိုက်ကြလေသည်၊၊ သာသနာရေးဌာနမှ အင်ဒိုနီးရှားသို့ကြွရောက် သာသနာပြုရန် မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးအား တာဝန်ပေးလိုက်သည်၊၊ ဆရာတော်ကြီးအနေဖြင့် လည်း တပည့်အရင်းဖြစ်သည့် အရှင်ဇိနရက္ခိတအားချီးမြှောက်လိုသောကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားသို့ကြွ ရောက် သာသနာပြုရန်သဘောတူခဲ့သည်၊၊ မဟာစည်ဆရတော်သည် (၁၃၂၁)ခု၊ ကဆုန်လဆန်း(၈)ရက်၊(၁၄.၅.၅၉) ကြာသာပတေးနေ့ ည(၈.၂၅)အချိန်တွင် မြန်မာပြည် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ဘီအိုစီလေယဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ သည်၊၊ အင်္ဂလိပ်စာ အခက်ခဲရှိသော ဆရာတော်အား ဦးစိန်ဝှက်မှ စင်္ကာပူလေကြောင်းတလျောက် ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်၊၊ စင်္ကာပူသို့ ညပိုင်း(၁၂.၅)ရောက်သည်၊၊ စင်္ကာပူတွင် တစ်ညမျှကျိန်းစက်ပြီး နောက်နေ့နံနက်(၁၀)နာရီတွင် စင်္ကာပူမှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ လေယဉ်ဖြင့် ခရီးဆက်သည်၊၊ နေ့(၁)နာရီတွင် ဂျာဗားကျွန်း ဂျကာတာလေဆိပ်သို့ ရောက်သည်၊ ဆရာတော်သည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ၁၃၂၁ခု၊ ကဆုန်လဆန်း(၈)ရက်မှ၊ ၁၃၂၁ခု၊ နယုန်လဆုပ်၁၀ရက်အထိ သီတင်းသုံးပြီး သာသနာပြုခဲ့သည်၊၊ ဆရာတော်၏ အင်ဒိုနီးရှားတွင် နေစဉ်အတွင်း သိမ်သမုတ်ခြင်း ရှင်နှစ်ပါးပြုပေးခြင်း ရဟန်းတပါးခံပေးခြင်း၊စသည့် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်၊၊ တရားပွဲ(၄၀)ကျော်ခန့်ကိုလည်း ဘာသာပြန်အကူအညီဖြင့် ဟောပြောခဲ့ပါသည်၊၊ ယ္ခုလက်ရှိ အင်ဒိုနီးရှားတွင် တွေ့မြင်နေရသော ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သာသနာမှ အရှင်ဇိနရက္ခိတနှင့် မဟာစည်ဆရာတော်တို့မှ ဆင်းသက်ခဲ့သော သာသနာဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားစွာဝန်ခံရပေမည်၊၊
ဦးဘွန်းအန်တစ်ဦးတည်းမှ စခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှားသာသနာသည် ယ္ခုဆိုလျင် လူပေါင်းသန်းနှင့်ချီ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာတော်သို့ရောက်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်၊၊ ရဟန်း သာမဏေပေါင်းလည်း ရာဂဏန်းအ ထိရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည်၊၊ အရှင်ဇိနရက္ခိတမှ စခဲ့သောအင်ဒိုနီးရှားသာသနာသည် (၁၀.၁၀.၂၀၁၀)တွင် အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူ၏ တပည့်အစဉ်ဆက်မှ ဆင်းသက်လာသော ဂျပန်လူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာ မစ်တာ တွန်ဂါရီယိုဂျို အန်ကာဆာ မိသားစုမှ အမြင့်ပေ(၁၇၀)ရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံစံတူကို အင်ဒိုမြေ၊ မီဒန်ပြည်နယ်၊ ဘရာစတာဂီမြို့တွင် တည်ဆောက် လှုဒါန်းခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်၊၊ ထိုရွှေတိဂုံစေတီတော် အနေကဇာတင်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ သံဃာတော် (၆၀၀)ကျော်ကြွရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်း မှတ်တမ်း များတွင် သိရပါသည်၊၊
“အလင်း စက်” စာဖတ်ပရိသတ်သို့ ဗောရောဗုဒေါစေတီတော် သမိုင်းနှင့် အင်ဒိုဗုဒ္ဓသာသနာအ ကြောင်း အရှင်တင်ပြခဲ့သည်မှာ ဤမျှဆိုလျင် အတန်အသင့်ပြည့်စုံပြီဟု ယူဆပါသည်၊၊ စိတ်ဝင်စား သူများအနေဖြင့် အင်တာနက်မှာဖြစ်စေ၊ စာအုပ်စာတမ်းများတွင်ဖြစ်စေ ဆက်လက်လေ့လာကြ ရန်ဖြစ်ပါသည်၊၊ အရှင့်အနေဖြင့် ၀က်ဆိုက်များတွင် အတင်နည်းနေသေးသည့် အကြောင်းအရာတ ရပ်ကို အင်တာနက်စာဖတ်သူများသို့ တင်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊ လုံးဝပြည့်စုံသည်ဟုလည်း မဆိုနိုင် ပါ၊၊ အရှင် ဤစာတမ်းကိုရေးသားရန် အချက်လက်လိုချင်၍ လေ့လာသောအခါ အင်တာနက်တွင် မြန်မာလိုရေးသားထားသည့် အချက်အလက် မရှိသလောက် ရှားသည်ကို သိလိုက်ရသည်၊၊ အရှင် တင်ပြသော ယ္ခုစာတမ်းသည် ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်စွတ်ရာလည်း ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်၊၊ အရှင် ဤစာတမ်းကိုရေးသားရာတွင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အင်ဒိုနီးရှား သာသနာပြုမှတ် တမ်းစာအုပ်နှင့် အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားသည့် A study of Burobudur in Indonesia စာတမ်း၊အခြား ပါးစပ်ရာဇ၀င်များကိုအခြေ ပြုပြီး ရေးသားပါကြောင်း ရိုးသားစွာ ၀န်ခံလိုပါသည်၊၊
ယ္ခုစာတမ်းတွင် စာဖတ်သူများအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းဗဟုသုတနှင့် ဘာသာရေးအမြင်၊ လူမျိုးရေး အမြင်များအပြင်၊ ဗုဒ္ဓအနုပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကိုလည်း ရနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်၊၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓစေတီတော်တစ်ဆူအကြောင်းကို သိခွင့်ရပြီး၊ သွားရောက်ပြီး လေ့လာဖူးမျှော် ကြည်ညိုနိုင်မည်ဆိုရင် ပို၍ကျေးဇူးများမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊ စေတီတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုရင်း ရှေးခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဘာသာတရား လေးနက်မှု၊ အနုပညာစွမ်းရည်၊ လက်မှုပညာ တိုးတက်မှု၊ လုပ်အားစွမ်းရည်များကို လေ့လာရမည် ဖြစ်သည်၊ စက်မှုမထွန်းကားသေးသည့် နှစ်ပေါင်း (၁၅၀၀)ခန့်က တည်ဆောက်ခဲ့သည့် စေတီတော်ကြီး၏ ခမ်းနားထည်ဝါမှုကိုလည်း အံ့သြဘနန်း တွေ့ ရမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊ မီးတောင်များမှဖြစ်သော ကျောက်သားတို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် ဗောရော ဗုဒေါ စေတီတော်ကြီး အကြောင်းကို လေ့လာခွင့် မှတ်သားခွင့်ရသော “အလင်း စက်”စာဖတ်သူများ မိမိတို့လက်ထက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သာသနာတော်ကို ရှေးခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ထက် အောက်မ ကျစေဘဲ ထောက်ပံ့အားပေးနိုင်ကြပါစေလို့ တိုက်တွန်းရင်း စာတမ်းကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်၊၊ အရှင်ကေ၀လ(အလင်း စက်)
(မှတ်ချက်/ ဗုဒသာနိကပထ၀ီဝင် (တောင်ပေါက်ဆရာတော်)၊ မဟာစည်ဆရာတော် အင်ဒိုနီးရှား သာသနာပြုမှတ်တမ်းနှင့် အခြားအင်တာနက်မှတ် တမ်းများ၊ ဗောရောဗုဒေါစေတီတော်ကြီး UNESCO မှတ်တမ်းများကို ကိုးကား၍ ဤစာတမ်းကို ရေးသားပါသည်၊၊)
လူဆိုတာ ခြေ နှစ်ချောင်းပေါ်မှာတလူလူလွှင့်ထူထားတဲ့အလံနဲ့တူလို့လူလို့ခေါ်၏
မေတ္တာပန်းလန်းရာမြေ ၏ မာတိကာ
Singapore ၊၊ကလင်မတီးကျောင်းတော် (မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ) မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်ပါသည်။
၁။ တနင်္လနေ့ ဦးဖြိုးလင်းနိုင်+ဒ်ါသဇင်ကြည်၊(ပထမ ဒုတိယအပတ်) ကိုသိန်းထိုင်လင်း+မဇင်ညိုသက်မိသားစု>>အာရုံ)-
၂။အင်္ဂါနေ့ ဆွမ်းအလှူရှင် >>(အာရုံ)ကိုစိုင်းညီညီ+မစုစုဝင်း၊သားထက်အာကာ၊ကိုစိုင်းစိုးလှိုင်+မစုစုအောင်၊ကိုမင်းထွန်း+မကေသီအောင်၊သားအောင်မင်းဟိန်း သ္မီးမေဖူးပွင့်။ဒေါ်၊မငယ် မိတ်ဆွေများ။>>(နေ့ဆွမ်း)
၃။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဆွမ်းအလှူရှင်-အပတ်စဉ်။မမျိုးလဲ့ကြည်၊ကိုစိုင်းဘိုဘို+မမျိုးဇာခြည် >>အာရုံ)
ဒေါ်ချိုချိုမိသားစု၊ ဒေါ်အေးအေးဆင့်နှင့်မိတ်ဆွေများ၊ဒေါ်ဝင်းမင်းခိုင်မိသားစု၊သားစု နှင့် ဒေါ်တင်ရီတို့အဖွဲ့>>(နေ့ဆွမ်း)
၄။ကြာသပတေးနေ့ >>ဆွမ်းအလှူရှင် -(ကိုရာဗီ+မအေးအေးမြင့်မိသာစု။(အပတ်တိုင်း) ပါရမီရှင်မိသားစု>>အာရုံ)။။ ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ဖြူ မိသားစုတ်ို့အဖွဲ့)(ပ-ဒု-တ အပတ်တိုင်း)>ဒေါ်မြမြအေးနှင့်အဖွဲ့>စ-အပါတ်(နေ့ဆွမ်း)မသဲသဲတို့လှူဒါန်း၊
၅။သောကြာ နေ့ ဆွမ်းအလှူရှင် - ကိုဝင်းနိုင်+မနန်းမြင့်မြင့်မိသားစု၊ (အာရုံ)(အပတ်စဉ်)၊>ဒေါ်အောင်ဘိတင်၊ဒေါ်သီတာ၊ဒေါ်တင်တင်ဝင်းမိသားစု
စနေ၊ အာရုံဆွမ်း၊(ပ။ဒု။တအပတ်) ကိုညီညီ+ မသီတာအေးမိသားစု၊ကိုကျော်ကျော်နိုင်မိသားစု
တနင်္ဂနွေနေ.များတွင် ဆရာတော် သံဃာတော်များမှာ တခြားသော ပင့်ဖိတ် ထားသည့် အလှူရှင် အိမ် များသို့ ကြွ ရောက် ကြပါသည်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခု နှစ် ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ (မိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာ) ၏ တစ်နှစ်တာ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ။
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ။ ။ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ရင်သွေးရတနာသင်တန်း (၂ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ)
အင်္ဂါ ညတိုင်း (၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ) ကွန်ပြူ တာသင်တန်း၊
ယခုဝါတွင်း ၀ါပကလတွင်သောကြာနေ့နှင်စနေနေ့ (မန်းနေပြည်တော်)၊(1pm မှ 6pm) အချိန်ပိုင်းတရားစခန်းများ)
နောက်ပိုင်းကာလများ မန္တလေး မိုးကုတ်ဆရာတော်များ စသည်....
၀ဘ်ဆိုက် ထာဝရအလှူရှင် ကိုဇေယျာမြင့်ရွေ
ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရမိုးကုတ်ရိပ်သာများ Email: anantametta.org@gmail.com
Facebook- VISIT MY PAGE
သစ်ထူးလွင် - ယခုမြန်မာ့သတင်း
အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၆ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူစယ်မြို့နယ် စယ်လန့် ကွက်သစ်ရပ်ကွက် တွင် ဗုံးပေါက် ကွဲမှုဖြစ်ပွါးခဲ့ရာ ၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အောက်...
Local news | Eleven Daily News
ပြည်တွင်းသတင်း - Latest News in Myanmar, Eleven Media Group
Shwe Rooms - ငွေလဲနှုန်း။Find Rooms
မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတရုံး (website)
ယနေ့ကြွလာ မိတ်သဟာ ချမ်းသာကြပါစေ(၄-၁-၂၀၁၅)
Ko Oo +Thandar
မြတ်ဗုဒ္ဓ ကို ကြည်ညိုခြင်း
မြန်မာ DVB သတင်း
What Buddha taunght
လောရှည်ကတဲ့ပွဲ မှ နည်းပညာ ပံ့ပိုးကူညီသည်။. Template images by 5ugarless. Powered by Blogger.